Cabdullahi Yuusuf oo caawa u duulaya Itoobiya iyo howsha Nuur Cadde oo ay cagaha ku dhegan yihiin uururka AlShabaab iyo koox xag jir ah oo ka tirsan maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaliya. Ruunkinet 06/02/07
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaliya Col. Cabdullahi Yuusuf ayaa caawa u duulaya magaalada Addis Abbaba ee dalka Itoobiya.
Madaxweynaha oo u joogay in muddo ah magaalada London arrimo la xiriira caafimaadkiisa ayaa la sheegay in uu kulo kulmi doono ra'isul wasaare Nuur Cadde magaalada Addis Ababa.
Dhanka kale, ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaliya Col. Nuur Cadde oo wada howlo nabad raadin ah iyo dib u heshiisiin dhex marta mucaaradka iyo xukuumaddiisa ayaa la sheegay in ay lugta jiidayaan ururka Alshabaab iyo qaar ka tirsan maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaliya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in kuwa ugu daran ee ka tirsan maamulka xukuumaddiisa ay ka mid yihiin taliyaha Nabadsuggidda, guddoomiya gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska.
Sidoo kale, ururka AlShabaab oo ay isugu mid yihiin Nuur Cadde iyo Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in ay wadaan weerarro isdaba joog ah oo ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ayagoo halka ay ka baxaan ciidamadaasi horay ka soo dega.
Dad badan oo ka tirsan dadkaku nool magaalada Muqdisho ayaa aaminsan in waqti la siiyo talada iyo qorshaha ra'isul wasaare Nuur Cadde.